‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर बाहेक विकल्प छैन’ - Bardiya Times
२०७८ जेष्ठ १३ गते, बिहीबार १७:४६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन कुनै हालतमा संवैधानिक ठहर नहुने बताएका छन् । असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भूमिका बढाउन सुझाव समेत दिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सभामुख सापकोटाले बिहीबार संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग सुझाव लिएका थिए । संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र टिकाराम भट्टराई लगायतले भूमिका बढाउन सभामुखलाई सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा असंवैधानक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको चारै जनाको धारणा रखेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुने कुरामा उनीहरुले धारणा राखेका छन् ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताको धारणा संक्षेपमा–
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको धारणा–
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यो संविधानमाथि जुन खालको घात गर्नुभयो यसलाई अंग्रेजीमा ‘सर्बसन’ भन्छ । त्यो भनेको राष्ट्र र संविधानमाथिको सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । मान्छे मारेको भन्दा पनि संविधानमाथि राज्यको कुनै पदाधिकारीले गर्ने अपराधलाई राष्ट्रघात र कसुर मानिन्छ । यति ठूलो जघन्य कसुर त्यो दुईटा निकायबाट हुंदापनि यो संसद मूकदर्शक भयो, प्रतिपक्ष मूकदर्शक भयो । त्यसप्रति मेरो त्यत्तिकै ठूलो आपत्ति र चिन्ता छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको धारणा–
सभामुख, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश कुनै पार्टीको हुँदैन । सभामुख संविधान र कानुनअनुसार चल्ने हो । कतिपय तटस्थता मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जहाँजहाँ सभामुखको भूमिका प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छ त्यहाँ संसदमार्फत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको काम संविधानअनुसार भएन भने प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले परामर्श गर्नुपर्ने हो तर किन गर्नुभएन ? भनेर पत्राचार पनि गर्न सक्नुपर्यो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको प्रतिकृया–
प्रधानमन्त्री र राष्टपतिले यो धाराबाट यो धारा जान्छ भनेर अंकगणितको आधारमा खेल खेल्नुभएको छ यो अति निर्लज्ज र लज्जास्पद छ । राष्ट्रपतिलाई यहाँ भयंकर मानिन्छ त्यो होइन । सभामुखले कानुनी र संवैधानिक कदम चाल्न तयार छु भनेर बस्नुपर्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्त टीकारम भट्टराईको धारणा–
संविधानको दायराभन्दा बाहिर अन्य संस्थाहरु प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जानुभयो भनेपनि सभामुख जान सक्नुहुन्न । यसको अर्थ संविधानले दिएको कर्तव्य पुरा गर्दिन भनेर इन्कार पनि गर्न सक्नुहुन्न । संसदको प्रमुख नेता भएको नाताले र संसदीय व्यवस्थाको मुल्य र मान्यता तथा संविधानवादको र संवैधानिक सर्वोच्चताको जगेर्ना गर्नका लागि सभामुखको भुमिका रहन्छ ।दृष्टि बाट